बास्तबमा डा.के.सी. अनसनको रहस्य के हो ?::KhojOnline.com
चिकित्सा शिक्षा विधेयक आफ्नो सुझावसहित पास गर्न पटक-पटक दिएको अल्टिमेटम सुनुवाई नभएपछि डा. केसीले साउन ९ गते सत्याग्रह थालेका थिए । ६१ वर्षीय केसीको यो ११ औं अनसन हो । उनले अनसन बस्न थालेको ५ वर्ष भइसक्यो । बास्तबमा डा.के.सी.को अनसनको सत्य तथ्य के को ? यस परिपाटीले भाबि अनसनकारी माथि पनि शंका उब्जेको छ /अनसनमा बस्दैमा के सबै माग पुरा हुन्छन त ? ११ /११ पटक अनसन बस्दा पनि अन्य डाक्टर किन अनसन बसेन ? के डाक्टरहरु अस्पतालमा अनसन बस्न मिल्छ ? १० पटकको अनसनमा के के सम्झौताहरु भए ? कतै आर्थिक कारोबार त भएन ? चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्न डाक्टर नै अनसन बस्नु पर्ने हो ? एक जना संकाहाले देश परिबर्तन गर्छु भनेर अनसन बस्दैमा हुन्छ के ? अरु जनताहरुलाई सहभागिता गराउनु पर्दैन ? अरु जनताहरु जायज माग प्रति किन उदासिन ?यस्ता थुप्रे जिज्ञासाहरु छन् यसको जवाफ कसले दिने ? त्यस कारण यो अनसनको भित्रि रहस्य जनताले खोज्नै पर्छ /हामी पनि जनताको साथमा हुनेछौ /